နိုက်ကလပ်မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ (၁)+ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » နိုက်ကလပ်မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ (၁)+ (၂)
နိုက်ကလပ်မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ (၁)+ (၂)
Posted by etone on Dec 31, 2010 in News | 19 comments
အပိုင်း တစ် http://ashinayethaka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=133:2010-12-28-00-20-44&catid=35:2010-11-13-06-53-37&Itemid=66
အပိုင်း နှစ် http://ashinayethaka.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134:2010-12-28-20-20-03&catid=35:2010-11-13-06-53-37&Itemid=66
အားလုံးပဲ အပေါ်က လင့်လေးကနေ သွားကြည့်ကြပါ တစ်ကယ်ကို အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ ။
သူများဘာသာတွေ ဒီလိုလုပ်ခံရတာ တစ်ခါမှမကြားမိ ၊မမြင်မိဘူး (ကိုယ်ကပဲမသိတာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး ) ။ တို့ဘာသာကို စော်ကားနေတာ များနေပြီ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ။
ဒေါက်တာ မတွေ့တာတောင် အတော်ကြာပြီ။ နယူးရီးယား သရဲလာခြောက်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။
ဒီဘ၀ အတွက်ရော သံသရာအတွက် ပါ အကောင်းဆုံးအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့တာပါ။
စာဖတ်ရင်းနဲ့ ရင်ထဲအရမ်းဆို.နင့်ပြီးမျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်။ဒီလိုလုပ်ပေးလို. ဂုဏ်ယူ သာဓုခေါ်တယ်ဗျာ။
တောက်! …….လုပ်ရက်လိုက်ကျတာကွာ…။ ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်း ကိုရန်မျိုးအောင်ရဲ စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားလာသလို…။ ဒီလိုလုပ်ရက်တဲ့လူတွေကိုလည်း လုပ်ရက်လေခြင်းဆိုပြီးတော့ ဒေါသဖြစ်မိတယ်။ နောက် ဟိုကောင် အဆိုတော်တစ်ကောင်ရှိသေးတယ်။ A kon လေ ဒီကောင်လည်း ဒီကောင်လည်း ဒီကောင့် MTV မှာ ဆင်းတုတော်တွေ ရှေ့မှ ကောင်မတွေ မဖွယ်ရာလုပ်ပြနေတာ
ရင်နာတယ်..။ စကားမစပ် ရှာရှာဖွေဖွေ လုပ်ပေးတဲ့ ဒေါ် အီးတုံးကိုလည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
ကို၇န်မျိုးအောင်ကိုကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ယူပါတယ် တို့တွေလည်းသူများဘာသာကို မကိုးကွယ်ဘူးဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမစော်ကားကြပါဘူး၊ ဘာလို့ဒီလိုလုပ်၇ပ်မျိုးလူမျိုးခြားတွေလုပ်ရဲကြတာလဲ နားမလည်ဘူး အကုန်လုံးတော့အသေဆိုးနဲ့သေကုန်ကြတော့မယ်
ရေးတဲ့လူကလည်း ရေးတယ်။ ဖတ်ပြီး ပြောတဲ့လူကလည်းပြောတယ်။ တို့ကတော့ ဖွင့်မရလို့ စိတ်ညစ်တယ်။ etone ရေ Link မပေးဘဲ ကူးတင်ရင်ပိုကောင်းမှာနော်။
MaMa ရေ … ပရိုက်ဗိတ်မေးလ်မှာ အီးမေလ်းအက်ဒရက်စ်ပေးပါ။ အဲ့ဒီကနေပို့ပေးပါ့မယ် ။ ကူးတော့မတင်ချင်ပါဘူး ကိုယ်က စေတနာနဲ့ ဖတ်ကြပါစေလို့တင်ပေးရင် စေတနာကို စော်ကားခံရတာတွေများနေလို့ ။
ဒီကောင် တွေ တော်တော် ရိုင်း ကြတာပဲ။ ရတယ် လေ ငါတို့ CLUB မှာလဲ ခရစ်တော် အ ရုတ် ကြီး ထားလိုက် ပေါ့။ ဒါမှ ကိုယ်ချင်း စာတတ် မှာ။
tha khin nay myo says:
ဖက်ရင်းဖက်ရင်းနဲ့ ရင်ထဲမှာဆို့ တက်လာတယ်။အရမ်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်၊ကိုရန်မျိုးအောင်၇ဲ့ ကုသိုလ်က အမြန်ဆုံးအကျိုးပေးမှာပါ။သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ….
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်(စစ်မစစ်မသိပါ) ဟု ခံယူထားသူအများစု (အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ) တွင် စေတီလေးမျိုးကိုအကြောင်းပြု၍
ရုပ်တုများကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရှင်တော်ဘုရား၏ ကိုယ်စားသဘောထား၍ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်ရာ အရပ်တို့ တွင်
တည်ရှိစေ၍ ကိုးကွယ်ကြကုန်လေသတတ် သောအခါ
ခေတ်ကာလအလိုက် ထို ရုပ်တုတို့ ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကိုယ်တိုင် စည်းပွားရေးအကြောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လည်း
ပြုလုပ်ရောင်းချ အသက်မွေးကြကုန်လေ၏တွင် အကြောင်းအရာ့(ချို့ ယွင်းချက်) အချို့ သည် ရှိလာရတော့သည်
ထိုရုပ်ထုတို့ ကို ထုဆစ်ကြလေသောအခါ ခြေလက်တို့ ဖြင့် ကန်ထိမ်း၍ ပြုလုပ်ကြလေကုန်၏
ထိုရုပ်တုတို့ ကို ပြုလုပ်နေစဉ်တွင် လောဘ ဒေါသ မောဟ နှင့်စက်ဆပ်သော စကားတို့ ကိုလည်း ပြောဆိုကုန်၏
ကိုယ်လက်အင်္ဂါအစုံတို့ ကိုလည်း ကိုင်တွယ်ကြကုန်၏ (ဖင်ယား ခေါင်းယား ဖင်ကုန် ခေါင်းကုတ်)
အကြောင်းမညီညွတ်သောအခါ ထက်ပိုင်းကျိုးခြင်း ဦးခေါင်းပြုတ်သွားခြင်းသို့ ရှိကြရလေ၏
ထိုသောအခါ ထို အပျက်အစီးတို့ ကို စားစရာချက်ပြုတ်ရန် ထင်းမီးအဖြစ်လည်းကောင်း
အသင့်ပြုလုပ်ပြီးကုန်သော ရုပ်တုတော်တို့ ကို ရောင်းကုန်အဖြင့်ရောင်းချကြသည်တွင်
လမ်းဘေး မြေပြင်တွင်လည်း တည်ခင်းရောင်းချကြလေကုန်၏
ဤတွင် ရုပ်တုတော်တို့ ကို အနေကဇာတင်ခြင်း (အလွန်ကျယ်ပြန့် ပါသည်) ဘုရားဟူ၍ အသိမှတ်ပြုကြ၏
(အချို့ သည် တိုင်ကိုပင် အရဟံ ဟုရေး၍ စိတ်၌တည်ပြီး ရှိခိုးပါလျှင် ကုသိုလ်ရ၏ ဆိုပြန်၏(ဒဿနအမြင်)
ထိုထက်ဆိုးဝါးသည်မှာ printer ရုပ်ပုံကူးစက်များဖြင့် မရေတွက်နိုင်သော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ ပုံတော်တို့ ကို ကူးထုတ်ရောင်းချကြလေ၏
အိမ်၏ မြင့်သောမြတ်သော နေရာမှားတွင် ချိတ်စွဲ ကပ်၍ ထားကြပါကုန်ပြီးလျှင်
(အချို့ အိမ်များတွင် ဗုဒ္ဓဘုရားခန်းသီးသန့် မရှိပါ ဗုဒ္ဓဘုရားစင်သာရှိပါသည်)
(ရှိကြသည့် ဗုဒ္ဓဘုရားစင် ဗုဒ္ဓဘုရားခန်းများသည်လည်း မြင်ခြင်း ကြားခြင်း များဖြင့် အစဉ် မလုံခြုံပါ)
ထိုဘုရားပုံတော်တို့ ၏ အရှေ့ ၌ပင် လူမှုကိစ္စတို့ ကို ပြောဆိုပြုလုပ်ကြကုန်၏ (ဘုရားစင်ရှေ့ ဘာညာကွိကွလုပ်ခြင်း)
ဤသည်က ကျွန်ပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကိုယ်တိုင် ထင်ထင်ရှားရှား ပြုလုပ်ကုန်ကြသည့်
မသိနားမလည်၍ ပြုနေသောသူများကို ကျွန်ုပ်တို့ ခွင့်လွှတ်သီးခံသင့်ကြပါပြီးလျှင်
ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရား၏ အဆုံးမနှင့် လုံးဝဥဿုံ မကိုက်ညီပါဟု ဆိုလိုက်ရပေတော့သတည်း။
စေတနာမေတ္တာကြီးမှားသလိုလို ပုံဖမ်းနေပါလား အောင်ပုရေ ။
သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အင်မတန်မှကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်သာဖြစ်သည်။ရွက်ပုံးသီး အာဇာနည်
တကူးတကရေးတင်ပေးတဲ့ ဆရာတော်အရှင်ဧသကနှင့်ကာယကံရှင်ဘုရားဒကာကိုရန်မျီုးအောင်….မအိတုံ တို့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…ကိုရန်မျိုးအောင်ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့စိတ်ဓါတ်ပါ။အင်မတန်ထူးခြားတဲ့စိတ်ဓါတ်ပါ။သာဓု…သာဓု….သာဓု….ဤ Link ကိုဖတ်၍မရလျှင် Burmatoday.net တွင်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။
တော်တော် မိုက်ရိုင်းတာပဲနော်။ သတင်းတော့ကြားပေမယ့်။
ဒီလို Night Club မှာကနေတဲ့ လူတွေနဲ့ ပုံတော်ကိုတော့ ခုမှ တွေ့ဖူးတာပါ။
တော်တော် မအပ်စပ်တဲ့မြင်ကွင်းပဲ။ လုပ်စရာရှားပါးလို့။
ကိုရန်မျိုးအောင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်ရပ်ကို လေးစားမိပါတယ်။